Arsenal Iyo Tottenham Hotspur Oo Kula Tartamaya Manchester United Saxiixa Lucas Vazquez'
HomeWararka Ciyaaraha MaantaArsenal iyo Tottenham Hotspur oo kula tartamaya Manchester United saxiixa Lucas Vazquez’
Arsenal iyo Tottenham Hotspur oo kula tartamaya Manchester United saxiixa Lucas Vazquez’
Kooxaha ku xifaaltama Waqooyiga London ee Arsenal iyo Tottenham Hotspur ayaa lagu soo waramayaa inay kula biireen Manchester United tartanka loogu jiro saxiixa Lucas Vazquez oo ka tirsan Real Madrid .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Spain ayaa lix xilli ciyaareed ku qaatay kooxda koowaad ee Madrid isagoo 33 kulan u saftay tartammada oo dhan ololahan.
Si kastaba ha noqotee, 29 jirkaan ayaa qandaraaskiisa uu dhacayaa xagaagan, waxaana ay u muuqataa inuu sii dhaqaaqi doono.
United ayaa lala xiriirinayay inay u dhaqaaqdo Vazquez, kaasoo inta badan loo isticmaalay daafaca midig xilli ciyaareedkan laakiin wuxuu ka ciyaari karaa meel kasta oo midig ka danbeysa.
Sida laga soo xigtay shabakadda Isbaanishka ee AS , si kastaba ha ahaatee, Red Devils ayaa tartan kala kulmi karta kooxaha Arsenal iyo Tottenham.
Labada dhinacba waxaa la sheegayaa inay baadi goob ugu jiraan ciyaaryahan cusub oo garabka midig ka ciyaari kara kaasoo abuuri kara hal abuur, iyadoo xaaladda qandaraaska Vazquez ay ka dhigeyso isaga xulasho ku habboon.
Paris Saint-Germain ayaa sidoo kale la rumeysan yahay inay raadineyso ciyaaryahanka kaliya ee amaahda ah ee Espanyol, kaasoo ay u badan tahay inuusan mar kale ciyaari doonin xilli ciyaareedkaan dhaawac dartiis.